FAQs - Jiande Chaomei Mazuva ese Makemikari Co., Ltd.
Kana iwe uchida sampuro yekuyedza, tinogona kuzviita sekukumbira kwako.
Kana chiri chigadzirwa chedu chenguva dzose muchitoro, iwe chingobhadhara mutengo wekutakura uye sampuli yemahara.
Unogona kuita dhizaini kwatiri?
OEM kana ODM sevhisi inowanikwa. Tinogona kugadzira chigadzirwa uye pasuru zvichienderana nezvinodiwa nevatengi
Iwo akajairwa mavara ezvigadzirwa zvekusarudza machena, girini, bhuruu Mimwe mivara inogona zvakare kusarudzwa.
pp isina-yakarukwa, inoshanda kabhoni (sarudzo), yakapfava donje, yakanyungudika yakapepereswa firita, vharafu (sarudzo).
Zvakadii nezve kutungamira nguva yekugadzira kwakawanda?
Kutendeseka, zvinoenderana nehukuru hwehuwandu uye mwaka waunoisa odha.
Kazhinji kutaura, iyo yekutungamira nguva ingangoita 20-25days. Saka isu tinokurudzira kuti utange kubvunza sepamberi sezvazvinogona.